Interview with Pado Mhan Mhan of KNU. part-1 ~ Htet Aung Kyaw
Interview with Pado Mhan Mhan of KNU. part-1
“လေးကေကော်တိုက်ပွဲနောက်ပိုင်း KNLA တပ်မဟာ ၇ ခုစလုံး တိုက်ပွဲထဲ ပါလာတယ်”
ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းက စတင်ခဲ့တဲ့ လေးကေကော် တိုက်ပွဲနောက်ပိုင်း KNLA တပ်မဟာ ၇ ခုစလုံး နွေဦးတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲစဉ်ထဲ ပါဝင်လာတယ်လို့ KNU တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး-၂ ဟောင်း- ပဒိုမန်းမန်ကပြောပါတယ်။
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီး တနှစ်ကြာကာလအတွင်း KNU အပါဝင် EAO တွေနဲ့ PDF, NUG အစိုးရတို့ကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ၊ ၂၀၂၂ အတွင်း တိုက်ပွဲအရှိန်မြှင့်နိုင်မယ့် အလားအလာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလိုဖြေကြားခဲ့တာပါ။
- တပ်မဟာ ၅ အပါဝင် KNU ထိမ်းချုပ်နယ်မြေတွေအပေါ် စကစ တပ်တွေရဲ့ ထိုးစစ်ဆင်မှု နောက်ဆုံးအခြေအနေ...
- နယ်ခြားစောင့်တပ်စခန်းသိမ်းပိုက်မှုအပါဝင် KNU, PDF တပ်တွေရဲ့ တန်ပြန် ထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှု အနေအထား...
- လေးကေကော်တိုက်ပွဲက နွေဦးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအတွက် ဘယ်လို သင်္ခန်းစာတွေ ပေးလိုက်သလဲ...
- ၂၀၂၂ အတွင်းမှာ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲ အရှိန်အဟုန် ပိုမြင့်လာနိုင်သလား... စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
(လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးနဲ့ လူထုတိုက်ပွဲကို ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်... စကစ ကကျင်းပပေးမယ့် ၂၀၂၃ ရွေးကောက်ပွဲကို ခေါင်းထဲကထုတ်ထားဖို့လိုတဲ့အကြောင်း ဆွေးနွေးချက်ပါဝင်တဲ့ ဒုတိယ ပိုင်းကိုတော့ မနက်ဖန်ညမှာ ဆက်လက် ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။)
Interview with Banya Khung Aung of KHRG. part-2
Interview with Banya Khung Aung of KHRG. part-1
Interview with Salai Yaw Mann of CDF-Mindat. part-2
Interview with Salai Yaw Mann of CDF- Mindat. part-1
Interview with Bo Na gar. part-2
Interview with Bo Na gar. Part-1
Interview with Pado Mhan Mhan of KNU. Part-2
Interview with Capt Nyi Thuta. Part-2
Interview with Capt Nyi Thuta. Part-1 Edit
Interview with U Than Soe Naing on 2022. Part-2
Interview with Than Soe Naing on 2022. Part-1
Interview with U Than Soe Naing. Intro.
Interview with Aung Thu Nyein on Hun San's trip to...
Interview with Bo Hla Tint of NUG on New Year Wish...
Interview with Bo Hla Tint of NUG on Hun San. Part-1
Exclusive Interview with UN Special Rapporteur on ...